Fanakatonana sy fivoriambe PCB OEM
Hiverina haingana Prototype PCBA
Serivisy fivoriambe SMT
Layout & Clone PCB
Fanamboarana sy fikojakojana
Fa maninona no Philifast
Turnkey PCB & PCBA fanamboarana sy fivoriambe
Orinasa elektronika PCB fanamboarana, SMT & ...
Turnkey PCB Assembly Elektronika vita pirinty Pcb Cir ...
RF microwave PCB miaraka amin'ny Flash Gold Surface vita ...
PCB malefaka 6 Layer fpc PCB malefaka-hentitra lehilahy ...
Fanontana vokatra elektronika Custom Circuit PC ...
Serivisy turnkey ho an'ny birao elektrika ...
tariby pcb takelaka tariby alimina tariby pcb ma ...
PHILIFAST dia mpanamboatra birao matihanina manome serivisy fanamboarana birao isan-karazany. Amin'ny maha-mpamatsy serivisy serivisy tokana PCB sy fivoriambe iray manana folo taona mahery ny fanafarana sy ny tantaran'ny fanondranana, Tamin'ny alàlan'ny ezaka niarahan'ny mpiasa rehetra, PHILIFAST dia nanjary mpitarika teknolojia pirinty vita pirinty sinoa.
PHILIFAST dia manome kojakoja elektronika marika BOM avo lenta, manana rojom-pivarotana singa tsy miovaova sy mahomby ary mahatsapa ny fivorian'ny PCB mora vidy ho an'ny mpanjifa. Manana ekipa matihanina BOM injeniera izahay handinika ny angon-drakitra BOM tany am-boalohany an'ny mpanjifa.
SERVICE ASSEMBLY SMT
Ny fizotry ny famokarana ny orinasa dia mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, misy fitaovana famokarana sy fanandramana isan-karazany, fepetra elektrika elektrika ary fitsapana solosaina feno, izay afaka mahafeno ny fepetra famokarana vokatra elektronika marina. Manana rafitra fitantanana kalitao feno sy siantifika.
PHILIFAST dia manana ekipa teknolojian'ny kloning PCB matihanina ary traikefa an-taonany maro. Tafiditra amin'ny sehatra elektronika isan-karazany. Ny clone PCB dia ny fampiasana ny teknolojia fikarohana ary ny fampandrosoana mba hamakafaka ny tabilao circuit, ary hamerenana ireo rakitra PCB an'ny vokatra tany am-boalohany, antontan-taratasy faktiora (BOM), rakitra an-tsokosoko ary rakitra ara-teknika hafa, ary koa ireo rakitra famokarana lamba vita amin'ny lamba landy PCB, ary ampiasao indray avy eo.
Ny PHILIFAST dia tsy vitan'ny manome serivisy fananganana PCB sy serivisy fivoriambe tokana ho an'ny mpanjifa, fa manome serivisy fandaharana IC ho an'ny mpanjifa. Ny ekipanay injeniera matihanina dia afaka mandahatra ny IC voatondro arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa. Ny mpanjifa dia manome fampahalalana mirehitra feno, torolàlana may ary boky mirehitra fitaovana.
Matetika, aorian'ny fivoriamben'ny boriborintany ary nahavitana ny AOI sy ny fisavana ny fisehoana dia matetika izahay no manoro hevitra ny mpanjifa mba hanome fomba fitiliana feno hanaovana ny fizahana farany amin'ny tabilao vita alohan'ny famonosana sy fandefasan'ny orinasanay. PHILIFAST dia manana ekipa PCB Functional Test (FCT) matihanina. Ny fitsapana miasa dia ahafahantsika mahita sy manitsy ny tsy fahombiazan'ny singa, ny kilema amin'ny fivoriambe na ny olana mety hitranga alohan'ny fandefasana, ary manao troubleshooting sy fikojakojana mandaitra.
iza no philifast
Maninona no PHILIFAST
Shenzhen Fhilifast Electronics Co., Ltd. Hita tamin'ny taona 2005. Tamin'ny alàlan'ny fampandrosoana maharitra 10 taona mahery, nampahafantatra ny fitaovana famokarana mandroso indrindra ny orinasa, ary nanangana ekipa injeniera matihanina, nanangona traikefa betsaka amin'ny famokarana sy ny fitantanana mandritra ny famokarana. Ny orinasanay dia manana rafitra fitantanana kalitao feno, rafitra feno fametahana rojom-bolo, ary nahavita famokarana lehibe. Ny tsenan'ny mpanjifantsika manarona eran'izao tontolo izao, ny vokatra sy ny haitao lehibe dia aondrana any amin'ny tsena eropeana sy amerikana. Ny vokatra rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitra IPC sy UL.
√ Ahenao ny vidinao: Turnkey PCBA Assembly; Vahaolana BOM hampihena ny vidiny; Torohevitra matihanina ho an'ny fanatsarana endrikao
√ Fiantohana kalitao: ISO14001, IATF16949, UL voamarina; 100% AOI / E-Testing / X-ray / Fandaharana rindrambaiko sy fanandramana miasa no tohana
√ Serivisy ho an'ny mpanjifa tsara indrindra: 24 ora an-tserasera; Valin-kafatra Aftersales ara-potoana ao anatin'ny 12 ora; Fanohanana ara-teknika matihanina;
• 2018 —— Fanokafana ny orinasa mpanamboatra Shenzhen PCBA & Turnkey.
• 2017 —— Fanitarana ny asa any amin'ny tsipika famokarana SMT 5.
• 2016 —— ISO14001 voamarina.
• 2015 —— Ny fanokafana ny ozinina fivoriambe PCB ao Shenzhen.
• 2012 —— IATF16949, ISO13485, ISO9001, UL voamarina.
• 2008 —— Ny fisokafan'ny orinasa PCB ao Henan.
• 2005 —— Fitaovana elektronika PHILIFAST.
PCBs dia mifanaraka amin'ny ISO9001, TS16949, UL, CE ary RoHS Certificate. Fivoriambe PCB SMT mifanaraka amin'ny ISO9001, PDCA ary IPC-A-610E. Manompo ho an'ny mpanjifantsika manerana an'izao tontolo izao izahay. Ny rafitra fitantanana kalitao manara-penitra dia nihatsara loatra mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa.
• ISO9001: fitantanana kalitao 2008
• Fanaraha-maso tonga 100% avy amin'ny IQC
• Fitsapana E-100%
• fenitra IPCII sy IPCIII amin'ny fanekena
asa fitoriana: Ny tanjonay dia ny manome serivisy fanamboarana elektronika matihanina ary vahaolana manokana momba ny fividianana faritra avo lenta miaraka amin'ny kalitao avo lenta ho an'ny mpanjifanay tsirairay.
Miaraka amin'ny mpanjifa an'arivony isan-taona izahay, hainay tsara ny manompo tsara ny mpanjifantsika:
• Azo antoka ny kalitao
• Vidiny ambany kokoa amin'ny serivisy fanaingoana PCB & PCBA fanalahidy
• Tsy mila MOQ
• tahan'ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa 99%
• fangatahana injeniera maimaimpoana ary fizahana DFM avy amin'ny ekipa injeniera matihanina
Maninona no mitady ny mpanamboatra PCB anao any Shina
Inona no takiana amin'ny famokarana PCB anao
Fomba fiasa PCB sy PCB Assembly
Ahoana ny fampihenana ny vidin'ny famokarana PCB anao?
Ahoana no hanombohana ny baiko?
Alefaso azafady ny fisie PCB Gerber anao, fisafidiana & Ampidino ireo rakitra / Centroid, rakitra BOM amin'ny mailaka anay: sales@fljpcb.com
Mandehana amin'ny mailaka
Ny orinasanay dia manana rafitra fitantanana kalitao feno, rafitra feno rafitry ny famatsiana ary nahavita famokarana lehibe.
Adress: 203A / F2 Building Comprehensive A, Getailong Industrial Park, No.227 Bulong Road, Bantian Street, Longgang District, 518129, Shenzhen, Guangdong, China
Telefaona: +86 15302615374